Ny zavatra 10 tsara indrindra hatao any Madrid | Vaovao momba ny dia
Top 10 zavatra tokony hatao any Madrid
Vaovao momba ny dia | | Madrid
Madrid dia tanàna feno fahafaha-manao, izay manolotra karazana kolontsaina sy fialamboly isan-karazany. Mety handany faran'ny herinandro lava, feno bar, tsangambato ary arabe tonga lafatra handehanana sy hahafantarana ny tanàna lalina ny renivohitra Espaniola. Amin'io lafiny io, ny fomba tsara hahafantarana ny tanàna dia amin'ny alàlan'ny a fitsidihana maimaim-poana any Madrid miaraka amin'i Guruwalk. Manaraka izany, atolotray ny zavatra 10 lehibe tokony hatao any Madrid, iray amin'ireo tanàna manintona indrindra eto España.
1 Ny Art Walk
3 Ny lalana
4 Kianja Santiago Bernabéu
5 Ny lapan'ny mpanjaka
6 Ny tempolin'i Debod
7 Ny varavaran'ny masoandro
8 Ny faritry ny La Latina
9 Bara fisakafoanana an'i Chueca
Ny Art Walk
El Paseo del Arte dia milanja iray kilometatra ny lavany izay misy ny tranombakoka Prado, ny Thyssen-Bornemisza Museum ary ny Reina Sofía Museum. Noho izany, raha te-hitsidika azy rehetra ianao dia azo atao ny mividy ny Karatra Paseo del Arte izay misy ny fidirana amin'izy telo. Ny 2019 dia daty manokana hitsidika ny Prado Museum ihany koa satria amin'ity taona ity dia mankalaza ny faha-roa taonany. Misy tranombakoka hafa toa ny tranom-bakoka na ny tranombakoka arkeolojika mendrika hotsidihina.
Tsy ho afaka hilaza ianao hoe mahalala an'i Madrid raha tsy mankany amin'ny Retiro Park. Heverina ho maitso maitso ao an-tanàna, ny Retiro Park dia misy 118 hektara ahafahanao mandeha, mitaingina sambo na hanao fitsangatsanganana. Anisan'ireo zaridaina samihafa, ny tena zava-dehibe dia ny zaridaina Vivaces, ny zaridaina Cecilio Rodríguez ary ny Rosaleda. Ao amin'ny Retiro Park dia misy ihany koa ilay antsoina hoe Palacio de Cristal, izay ampiasaina ankehitriny ho efitrano fampirantiana.
El Rastro dia atao amin'ny marainan'ny alahady sy ny fialantsasatra ary manana tantara lava, satria 250 taona izy. Ao anatin'izany no ahitanao ny akanjo sy boky ary fanaka an-tanan-tanana ka hatramin'ny entana tena izy. Natao teo amin'ny tehezan'i Ribera de Curtidores, ao amin'ny manodidina an'i Lavapiés, no nanambarana ny tsenan'i Rastro ho lova ara-kolontsain'ny mponina any Madrid.
Kianja Santiago Bernabéu
Na dia tsy mpankafy baolina kitra aza ianao dia mbola mendrika ny hitsidika ny Kianja Santiago Bernabeu. Nosokafana tamin'ny 1947, manana olona mihoatra ny 80.000 izy. Ny fitsidihana azy dia azonao atao ny mitsangatsangana izay ahitana fidirana amin'ireo faritra eny an-tsaha toy ny boaty filoham-pirenena, ny kianja filalaovana na ny efitranon'ny mpilalao. Rehefa manao fitsangatsanganana dia azonao atao ihany koa ny mahita ny amboara tratran'i Real Madrid rehefa mandeha ny fotoana.
Ny lapan'ny mpanjaka
Ny Royal Palace no lapa lehibe indrindra eran'ny Eropa Andrefana rehetra, misy efitrano mihoatra ny 3.000 miparitaka mihoatra ny 135.000 metatra toradroa. Androany, ny Palace dia toerana natokana manokana hanaovana ny lanonam-panjakana, na dia azo tsidihina ihany aza. Ny manodidina ny Royal Palace dia iray amin'ireo toerana mety indrindra hankafizana ny filentehan'ny masoandro any an-tanànan'i Madrid. Amin'ny maritrano, tsy mitovy amin'ny an'ny Baroque ny lapan'ny hafa.
Ny tempolin'i Debod
Ny tempolin'i Debod dia iray amin'ireo toerana tonga lafatra indrindra hankafizana ny filentehan'ny masoandro sy ny alina feno kintana. Any amin'ny Parque del Cuartel de la Montaña, ity tempoly egyptiana ity dia nomen'ny governemanta an'io firenena io ho an'i Espana mba hisorohana ny fanjavonany noho ny tondra-drano vokatry ny fananganana tohodrano.. Ao anatin'ilay trano dia azonao atao ny mahita vinavina momba ny audiovisual izay hazavaina amin'ny antsipiriany ny tantara sy ny antsipiriany mahaliana momba ny tempoly.
Ny varavaran'ny masoandro
Puerta del Sol no ivon-toeran'ny tandindon'ny tanàna, toerana fihaonana ary hetsi-panoherana an-dalambe maro. Izy io koa dia mirakitra sary masina sasany eto an-tanàna: ny famantaranandro Casa de Correos, ny takelaka Kilometra Zero ary ny sarin'ny Bear sy ny Strawberry Tree..
Ny faritry ny La Latina
Ny terraces izay misy eo amin'ny manodidina an'i La Latina dia iray amin'ireo tsara tarehy indrindra eran'i Madrid. Na dia misy fahasamihafana aza ny vidiny, amin'ny dia mankany an-tanàna dia mendrika ny hisafidianana trano kely somary lafo kokoa izay manome antsika fomba fijery mahavariana, menio isan-karazany ary toetra tena izy mamaritra ny manodidina.
Bara fisakafoanana an'i Chueca
Chueca dia mbola iray amin'ireo mpifanolo-bodirindrina ao Madrid miaraka amin'ny fiainana an-tany betsaka indrindra. Feno bara sy trano fisotroana kely, ny trano manodidina dia manana trano miavaka toa an'i Bar Chicote, voatondro intelo ho bar tsara indrindra any Eropa. Na izany aza, any Chueca dia misy toerana maro isan-karazany izay miainga avy amin'ny kafe kely ara-kolontsaina ka hatrany amin'ny toeram-pandihizana lehibe. Anisan'ireo teo aloha, nisongadina ny efitrano Libertad 8, raha anisan'ireo kosa ilay fantatra amin'ny anarana hoe Teatro Barcelonaó TClub.
Ny fandehanana any Gran Vía dia miaina zato isan-jato ao Madrid. Feno fivarotana sy rivo-piainana mahafinaritra, Gran Vía dia iray amin'ireo arteria lehibe eto an-tanàna, ary koa ny arabe malaza eto an-drenivohitra Espaniola.. Rehefa mitsangatsangana manaraka an'i Gran Vía ianao dia afaka mahita ny marika Metropolis Building, ny tranoben'ny Telefónica, ny Palacio de la Prensa, ny Teatra Rialto, ny Plaza de Callao ary ny tranon'ny España.
Azo antoka fa misy maro hafa toerana tena ilaina any Madrid hamenoana ity lisitry ny 'inona no ho hita'Na dia miaraka amin'ireo teboka mahaliana 10 ireo aza ianao dia afaka manomboka mahafantatra ny kolotsaina, ny zavakanto ary ny tantaran'ny renivohitra Espaniôla.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Madrid » Top 10 zavatra tokony hatao any Madrid
Fiantohana fitsangatsanganana iraisam-pirenena